चन्दन तस्करका नाइके ‘पुष्पाराज’ कसरी बने अल्लुअर्जुन ? – Pahilo Page
चन्दन तस्करका नाइके ‘पुष्पाराज’ कसरी बने अल्लुअर्जुन ?
२९ माघ २०७८, शनिबार ०७:४३ 122 पटक हेरिएको
काठमाडौँ । दक्षिण भारतीय फिल्म ‘पुष्पा’ ले चलचित्र जगतमा आतंक मच्चाएको छ । यो चलचित्रले अचम्मको व्यापार गरेको छ भने ‘पुष्पा’का मुख्य कलाकार अल्लु अर्जुनको पहिचान अहिले राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रियसम्म पुगेको छ । अल्लुले यो फिल्ममा काम गर्न अचम्मको परिवर्तन गरेका छन्, जसको झलक भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
विश्वभर नै आतंक मच्चाएको पुष्पाले जताततै सबैको माया पाइरहेको छ । फिल्मको संवाददेखि लिएर गीतसम्म सबैको पहिलो रोजाइ रहन्छ । फिल्मको जताततै चर्चा भयो, सिलेब्स पनि यसका गीतमा रिल्स बनाएको देखियो । यस्तो अवस्थामा अहिले फिल्मसँग सम्बन्धित एउटा जबरदस्त भिडियो भाइरल भइरहेको छ जसमा अल्लु अर्जुन आफैं ‘पुष्पाराज’ बन्ने गर्दथे (अल्लु अर्जुन ट्रान्सफर्मेशन भिडियो) ।
भिडियोमा अल्लु अर्जुन आफ्नो महँगो कारबाट तल झरेको देखिन्छ । कालो क्याजुअल आउटफिटमा निकै सुन्दर देखिएर उनी आफ्नो भ्यानिटी तर्फ हिंड्छन् जहाँ हेयरस्टाइलिस्ट र मेकअप आर्टिस्ट पहिले नै उपस्थित छन्। भिडियोमा उनी भ्यानिटी भ्यानमा गएर त्यहाँ मेकओभर गर्न बसेको देख्न सकिन्छ । त्यसपछि उनको लुक परिवर्तन गर्न हेयर स्टाइलिस्ट र मेकअप (अल्लु अर्जुन मेकओभर फर पुष्पा) कलाकारहरु उनको वरिपरि काम गरिरहेका छन् ।
यसमा कपाल घुमाएर चन्दन तस्कर बनाउन कृत्रिम मेकअपको प्रयोग गरिन्छ । सुकुमार निर्देशित फिल्म ‘पुष्पा द राइज स्टोरी’ मा अल्लु अर्जुनसँगै रश्मिका मन्डन्ना मुख्य भूमिकामा थिइन् । फिल्ममा अल्लु अर्जुन चन्दन तस्करको भूमिकामा छन्, यो फिल्ममा सामन्थाको आइटम गीत ‘उ अन्तावा’ पनि निकै चर्चित थियो ।